Vadzidzisi vedu - Cloud Library
Ane ushingi nechido chakadzama, John Bevere munyori ane mukurumbira akanyora mabhuku anoti Extraordinary, The Bait of Satan, The Fear of the Lord, Under Cover na Driven by Eternity. Mabhuku ake akanyorwa mumitauro inodarika zana (100), uye chirongwa chake chinonzi The Messenger (Mutumwa) chepachivhitvhiti (terevhizhoni) chinobuda vhiki rimwe nerimwe chinoonekwa pasi rose.John mutauri ane mukurumbira pamisangano nemumakereke huye ushumiri hwake hunovandudza upenyu hwevanoda kunzwisisa nekuita zvinorehwa neShoko raMwari. John anofarira kugara ku Colorado Springs nemudzimai wake, Lisa, anovawo munyori nemutauri ane mukurumbira, majaya ake mana, muroora nevazukuru.
Wona Zvakaturunurwa Tsamba yemagetsi John Bevere
Mutauri ane simba, ane chido chakadzama huye anonzwisisika. Ndiwo mashoko anotsanangura Lisa Bevere - Mutauri kunyika zhinji, munyori ane mukurumbira huye mumwe wevatepfenyuri ve chirongwa chepa chivhitivhiti (terevhizhoni) The Messenger (Mutumwa) chinotepfenyurwa munyika dzinodarika mazana maviri (200). Muhupenyu hwake huri pachena, Lisa anogovera Shoko raMwari achirisanganisa nezvaanosangana nazvo muhupenyu hwake. Izvi zvinoita kuti vateereri vawane rusununguko neshanduka muhupenyu hwavo. Semutsigiri wekururamisa, anokururdzira vamwe kuti vave mhinduro kumatambudziko ari pedyo neari kure. Anofarira kupedza nguva nemudiwa wake John Bevere, nevana vavo vana, muroora wavo tsvarakadenga nevazukuru vanoyemurika.
Wona Zvakaturunurwa Tsamba yemagetsi Lisa Bevere